1. Iziko i-Cape Town Science Centre libambe oomasifundisane ababizwa Africa Code Week "Train the Trainer" workshops abaxhaswa yinkampani ye-software yamazwe jikelele neyenziwa ngamaziko i-Cape Town Science Centre ne-Galway Education Centre.
2. Iveki i-Africa Code Week liphulo lamazwe ngokubanzi (continent-wide initiative) lokukhuthaza ukukhowudwa kwekhompyutha (ukuprogranywa kwekhompyutha (computer programming)) kulutsha olusebenzisa i-software efumaneka ngaphandle kwentlawulo.
3. Oomasifundisane be-Africa Code Week "Train the Trainer" workshops benzelwa kuphela ootitshala baseNtshona Koloni ngaphandle kwentlawulo.
3.1 Aba masifundisane bangahlawulelwayo be-"Train the Trainer" bootitshaala baya kujongana noku kulandelayo:
Kutheni kufundiswa nge-coding/computer programming kubafundi abasebancinci?
Ingafundiswa njani i-coding/computer programming kusetyenziswa u-SCRATCH (isoftware engahlawulelwayo).
Anokwenziwa njani amalungiselelo kamasifundisane we-coding/computer programming ukwenzela abafundi abaminyaka iyi-8 ukuya kweyi-16 ubudala.
Anokwenziwa njani amalungiselelo oomasifundisane babafundi kanye-kanye ngethuba le-Africa Code Week, ukususela nge-18 ukuya kwi-25 Oktobha 2017.
3.2 Aba masifundisane baxhobisa ootitshala ukwenzela ukuba bafundise abafundi izakhono zokukhowuda/zokuprograma ikhompyutha ezilula. I-Africa Code Week yenza ukuba babe nolwazi ngokukhowuda/ngokuprograma ikhompyutha (coding/computer programming) yaye ibethelela umdla kwizakhono zokufunda zenkulungwane ye-21st ngaphaya kweklasi ezikhuthaza:
ulwazi lokufunda nokubhala:
izakhono zokusombulula ingxaki;
izakhono zolwazi ngekhompyutha; kunye
nezakhono zokucinga nolwazi ngeenkqubo zezinto ngezinto (procedural literacy), o.k.t. ukucinga ngenkqubo zehlabathi.
4. I-Africa Code Week liphulo elikunyaka walo wesithathu kungokunje yaye abaliphumezayo bakhuthaza ootitshala beNtshona Koloni baqhubeke ukuthatha inxaxheba kweli phulo lezembali lelizwe ngokubanzi ngokubhalisela ukuthatha inxaxheba koomasifundisane abangahlawulelwayo be-"Train the Trainer" workshops. Ootitshala abathatha inxaxheba baya kunikwa izibonelelo ezingahlawulelwayo, iziphungo neSatifikethi soKubakho (Certificate of Attendance).
5. ISebe leMfundo leNtshona Koloni (ISebe WCED) likhuthaza izikolo zibhalise yaye zithathe inxaxheba koomasifundisane be-Africa Code Week "Train the Trainer" workshops ngo-2017.
6. ISebe iWCED licela ukuba izikolo ziqaphele ukuba imihla efanelekileyo kwaba masifundisane ngowe-11, 12 nowe-13 Agasti 2017 (Emva kwemini ngoLwesihlanu, kusasa okanye emva kwemini ngoMgqibelo, nakusasa ngeCawa). Ootitshala banako ukuya kwiseshoni yakusasa okanye kweyasemva kwemini nezingekho ngaphezu kweeyure ezimbini ngalo naluphi na usuku kwezi.
7. Yonke imbalelwano iya kuthunyelwa nge-imeyili, nge-SMS kunye/okanye ngefoni yaye mayithunyelwe kwi-Cape Town Science Centre. Ootitshala mabaxele ukuba bakhetha oluphi na udidi lonxibelelwano xa bebhalisa.
8. Ukufumana iinkcukacha ezingaphezulu ngokumalunga noku okanye ngokubhalisa, uyacelwa uqhagamshelane ne-Cape Town Science Centre ngefoni, ngefeksi okanye ngokungena kwiziko lewebhu layo:
Ifoni 021 300 3200 (Ukufumana ingcaciso); 083 276 9509 (Theresa)
Ifeksi 086 519 7227
I-imeyili theresafnomfundo@ctsc.org.za okanye info@ctsc.org.za
Iziko lewebhu http://ctsc.org.za
9. Ziyacelwa iinqununu ukuba zazise okukule ngcaciso imfutshane bonke ootitshala bamaBakala 3 ukuya ku-10 ukuze bakuthathele ingqalelo.